हार्वेस्ट फेस्टिवल अनुग्रहको उत्सव जुन मूर्तिपूजक समयहरूबाट आउँदछ Absolut यात्रा
लुइस मार्टिनो | | अल्बानिया
फसललाई धन्यवाद दिन
फसल चाडको उत्सव हो धन्यवाद सारा संसारमा फैलियो। यसको उत्पत्ति समयमा फिर्ता जान्छ मानव आसीन भयो र कृषि अभ्यास गर्न थाले। यसको साथ, उनले आफ्ना देवताहरूलाई धन्यवाद दिए कि पृथ्वीले उनलाई खानेकुरा दियो।
मानिस र प्रकृतिको फल बीचको नैतिक सम्बन्ध फेला पर्दछ हाम्रो प्रजातिको सार र यसले भूमि र खानाबाट ती श्रद्धांजलिहरूको एकदम स collection्ग्रह संग्रह गर्दछ जुन तिनीहरूले हामीलाई लगभग धार्मिक आयाम प्राप्त गर्न प्रदान गर्दछ वा कम्तिमा। रहस्यवाद.
1 फसल चाडको संक्षिप्त इतिहास
2 फसल चाड, सारा संसारभरि धन्यवादको उत्सव
2.1 धन्यबाद दिने दिन
2.2 एरेन्टेन्ड, जर्मन फसल चाड
2.3 यहूदीहरू सुक्कोट
2.4 चिनियाँ मध्य शरद Festivalतु
फसल चाडको संक्षिप्त इतिहास
पुरातन मिश्रीहरूले धन्यवाद दिए ओसिसिस राम्रो अrav्गुर फसल को लागी, समय को नक्सा अनुसार। अनुकूलन सारियो ग्रीस, जहाँ पार्टीहरु को सम्मान मा आयोजित थिए डियोनिसस र पछि रोमजहाँ देव भनिन्थ्यो बाको। वास्तवमा ल्याटिनसले पनि अन्य फसल चाडहरू जस्तै मनाए अनाज, धन्यवाद दिन Ceres यो प्रदान गरिएको अनाज।
यस समयमा मध्य युगहरू त्यो परम्परा किसानहरूमाझ चल्दै आएको थियो। यद्यपि यसले यसको वैधताको केही हिस्सा गुमायो। कारण यो छ कि धेरै कृषि क्षेत्रहरू मठहरूमा खेती गरिएको थियो र पादरीहरू, जसलाई तपाईंले बुझ्नुहुनेछ, एकदमै चंचल अभिव्यक्तिहरूलाई दिइएन, यद्यपि तिनीहरू कृतज्ञ थिए। देवत्व फल प्राप्त।
यद्यपि यो परम्परा भने रहेन। समेतको आगमन संग Renacimiento र यसको जीववाद धेरै तीव्र र यो आज सम्म संसारको हरेक मानिसहरुमा मनाउन बन्द गरिएको छैन। यदि तपाईं फसलको समयमा कुनै गाउँ भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि उनीहरूले त्यो क्षण कसरी शैलीमा मनाउँदछन् उत्पादनहरू धन्यवाद दिन।
चेक गणराज्यमा अन्न महोत्सव
फसल चाड, सारा संसारभरि धन्यवादको उत्सव
वास्तवमा, हाम्रो ग्रहको बिभिन्न राष्ट्रहरूमा मनाउने केहि सब भन्दा महत्त्वपूर्ण चाडहरू यसको उत्पत्ति हो फसल चाड। उदाहरण को लागी मा ईरान मनाइन्छ मेहरगनपुरानो समयदेखि फेस्टिभल फारसी साम्राज्य र त्यो दुबै शरद andतु र फसल को आगमन मनाउँछ।
यसको अंशको लागि, मा भारत उनीहरूसँग त्यस्तै उत्सवहरू छन् मकर संक्रान्ति भूमि मा के प्राप्त भयो धन्यवाद दिन। तर सबैभन्दा लोकप्रिय चाडहरू जुन तिनीहरूका फसलको सुरुमा हुन्छन् जुन ती हुन् जुन हामी तपाईंलाई व्याख्या गर्न गइरहेका छौं र त्यो पक्कै तपाईंलाई परिचित हुनेछ।
यो मा एक राष्ट्रिय बिदा हो संयुक्त राज्य अमेरिका, कानाडा र केहि मा क्यारिबियन टापु। यद्यपि सबै विद्वानहरू यसका उत्पत्तिहरू थिए भनेर सहमत छन् फसल मनाउने, तिनीहरू यसको वास्तविक सुरुको बारेमा स्पष्ट छैन। कोही भन्छन कि यो वर्तमान मा स्पेनियहरु द्वारा आयोजित उत्सवहरुबाट लिइएको हो फ्लोरिडा यस कारणले गर्दा, अन्यले औंल्याए कि यो अंग्रेजी बसोबासहरूले सत्रौं शताब्दीमा सुरू गरेको हो।
जे भए पनि, तपाईंलाई पहिले नै थाहा होला, नोभेम्बरमा चौथो बिहिवारमा, ती देशहरूबाट आएका परिवारहरू टेबुल वरिपरि भेला हुन्छन् रमाइलो गर्न भरिएको र भुनी टर्की खाना खाने समयमा कद्दू पाई संग। संयुक्त राज्यमा यो छुट्टी हो र स्टोरहरूको श्रृंखला मैसी गरेको संगठित एक ठूलो परेड म्यानहट्टनको सडकमा। अर्को दिन, अमेरिकीहरू क्रिसमस शपिंग सिजन शुरू गर्दछन्। उही हो र कालो शुक्रबार.
एरेन्डेन्क, जर्मन फसल चाड
लोकगीतकारका अनुसार Alois Doring, जर्मन धन्यवाद वा एरेन्डेन्क यसको बालीनालीलाई कदर गर्ने मसीही परम्परामा यसको नजिकको उत्पत्ति छ। यद्यपि टाढाका व्यक्तिहरूले हामीलाई उही रोम र ग्रीसमा लैजान्छन्, जसको बारेमा हामी तपाईंलाई भन्दै थियौं।
जर्मनीमा गिर्जाघरहरू तरकारीहरू, फलफूलहरू, अन्नफलहरूले सजाइएको छ र भूमिबाट प्राप्त अन्य उत्पादनहरू, साथै उनीहरूसँगै तयार पारिएको खाना, उदाहरणका लागि, रोटी वा मह। र बजार पनि विपन्न वर्गको लाभका लागि संगठित छन्।
यो सेप्टेम्बरको अन्तिम आइतवार वा अक्टुबरको पहिलो दिनमा हुन्छ र जर्मनहरू पनि यसलाई परिवारका रूपमा भेला गर्छन्। उनीहरूले मनपर्ने मेनूमा टर्की वा अन्य मासु समावेश हुन सक्छ। तर सामान्य कुरा भनेको ठीकसँग लिनुपर्दछ स्टू को एरेन्डेन्क, एक हार्दिक स्ट्यू जसमा हरियो सिमी, आलु, काल, लीक, गाजर, प्याज र पोर्क छ। र यसको साथमा गहुँको रोटी र ए चेस्टनटको साथ कद्दू क्रीम.
El सुकोट यहूदी
इजरायलीहरु पनि आफ्नो फसल चाड छ। उही हो र सुकोट इजिप्टबाट भागेर मरुभूमिको बाटो हुँदै बाइबलको यात्रामा इस्रायलका मानिसहरूले भोग्नु परेको अपमानहरू पनि सम्झन सकिन्छ। यो सेप्टेम्बर १ and र २२ बीचमा लिन्छ र यसलाई पनि चिनिन्छ छाप्रो वा केबिनहरूको भोज किनभने मूल रूपमा, योaकेहि दिन खर्च गरेर मनाइएको थियो सुक्का वा अस्थायी निवास।
यस अवस्थामा, खाने भन्दा बढी, उत्पादनहरू धन्य हुन्। कल छ चार प्रजातिहरूको आशीर्वाद, जसले पाम, मर्टल, सिट्रस र विलो समावेश गर्दछ। यो सबै यहूदी धर्मको एक मुख्य उत्सवको उपलक्ष्यमा।
चिनियाँ मध्य शरद Festivalतु
यो विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फसल चाडपर्व हो किनकि चिनियाँ बाहेक, यो पनि द्वारा मनाइन्छ जापानी, तिनीहरू यसलाई के भन्छन् सुसुमी; को कोरियाली, जो यसलाई कल चुसेक, र भियतनामी। तर यी देशहरूको पहिलोमा यो महत्त्वपूर्ण छ, यो नयाँ वर्ष पछि यसको सबैभन्दा प्रासंगिक उत्सव मान्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई।
यो हान क्यालेन्डर को आठौं महिना को पन्ध्रौं दिन मा लिन्छ, जुन हाम्रो मा सेप्टेम्बर को महिना हो। यो पनि भनिन्छ चन्द्र महोत्सव किनकि पुराना सम्राटहरूले फसलको लागि धन्यवाद दिन ताराको पूजा गरे। वास्तवमा आज पनि परिवारहरू चन्द्रमाको चिन्तन गर्न भेला हुन्छन् र तथाकथित पनि तयार गर्दछन् चन्द्र केक। थप रूपमा, परेडहरू र अन्य गतिविधिहरू हुन्छन्।
अन्तमा, बाली काट्ने चाड, ए धन्यवाद उत्सव त्यो मूर्तिपूजक समय बाट आउँछ, गर्न जारी छ आज पूर्ण बलमाया त देशबाट प्राप्त गरेको सामानको लागि कृतज्ञताका रूपमा, वा हाम्रा पुर्खाहरूबाट एक उत्सव सम्पदाको रूपमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » हार्वेस्ट फेस्टिवल मूर्तिपूजक समयहरूबाट आउने ग्रेसहरूको उत्सव